Tola “programming” intarneetii irratti iddoo itti bartu – Barataa
Barnoota saganteessuu koompiitara (computer programming) baruun jireenya kee keessatti barbaachisaadha jedheen yaada. Daldaltoonni, hojjattoonni(freelancers) barnoota kana ni baratu. Anis waggoota darban barachaa tureera. Ammas barataa jira. Sababa kanaanis faayidaalee gama teeknoolojiin jiraniin salphatti wal baraa jira.
Barnoonni programming gosa tokko yookiin lama qofaa miti. Gosa heddutu jira. Hundumaa yeroo tokkos baruun hin danda’amu. Adeemsa adeemsaan malee. Biyya keenya keessatti sadarkaa yuuniversiitii irra yoo taate malee, carraan barnoota kana barachuu dhiphaadha.
Galanni teeknoolojiif haa tahuu, barnoota programming iis haa tahuu, kan biroo manuma teenyee moobaayila yookiin koompiitara keenya irraa salphatti baruu dandeenya. Wanti guddaan nu barbaachisu qunnamtii intarneeta qofa qabaachuudha. Maxxansa kana keessatti marsariitilee programming toluma, kafaltii tokko malee nama barsiisaniin wal isin barsiisa. Isin kan isiniif tole irraa baruu dandeessu.
Iddoon tola programming baruudhaaf jalqaba irratti taa’u yoo jiraate CodeAcedamy dha. CodeAcedamyn barattoota miliyoona 24 ol hanga an maxxansa kana barreessuutti barsiisaa jira. Barnoota haala ajaa’ibaa fi salphaa taheen, qorumsaa fi gaafileedhaan deeggaree kenna. HTML irraa kaasee hamma python fi Ruby tti barsiisa.
Bara 2012tti hundeeffame. Gosa barnoota 1000 ol barsiisa. Waraqaa ga’uumsaa (certificate) fudhachuudhaaf kafaltanis yuuniversiitilee gurguddoo garagaraa kanneen akka yuuniversitii Washington, Stanford fi kkf irraa tola bartu.
Iddoon birraa tola isin barsiisu yoo jiraate edX dha. Jalqaba yuuniversiitii Harvard dhaan hundeeffame. Barnoota teeknoolojii fi tiyoorilee gara garaa salphatti bartu.
Inni biroo immoo Udemy dha. Barnoota gara garaa viidiyoodhaan deeggaramuun bartu.
Iddoon kun iddoo namoonni sagantaa koompiitara hojjattan(programmers) ciccimoon irratti argamaniidha. Kanaafuu, dandeettii kee jara irraa iddoo itti cimsachuu dandeessudha.
Barnoonni asirratti kennamu bartee xumuruuf sa’aa 12 qofa si fudhata. Akkaataa taphoota(game), app gara garaa fi website gara garaa itti hojjatan salphatti barta.
7. Khan Acedamy
Dhaabbanni kun bara 2006tti nama Salman Khan jedhamuun hundeeffame. Viidiyoolee tartiiba tartiibaan barnoota siif kennan heddu jira.
Xumura irratti wanti jedhu, iddooleen tola intarneetii irratti programming barsiisan kanen qofaa miti. Github, w3schools, sololearn, udacity, tutorialspoint, guru99 fi kkf heddutti jira.
Ati immoo filannoolee kanneen keessaa tokko fayyadamtee barnoota argachuu dandeessa.
Creativity, Technology, WordPress December 12, 2018